Akụkọ - Beijing na -eme atụmatụ ị nweta ụlọ obibi nke kpakpando ruru 1,000 n'ime afọ ise
Beijing na-eme atụmatụ ị nweta ụlọ obibi nke kpakpando ruru 1,000 n'ime afọ ise
Na June 16, Beijing nwere ọtụtụ ọgbakọ mkparịta ụka iji mee emume ncheta otu narị afọ nke ntọala Kọmunist nke China, "Beijing kwalitere nke ọma". Na nnọkọ ahụ, Kang Sen, osote odeakwụkwọ nke Kọmitii Ọrụ Ugbo na Ọrụ Obodo nke Beijing, osote onye isi ụlọ ọrụ Municipal Bureau of Agriculture and Rural Affairs, na ọnụ na -ekwuchitere, webatara na n'ihe gbasara ụlọ ọrụ ime obodo, Beijing ga -elekwasị anya na ụlọ obodo na atụmatụ. inyocha ụlọ oriri na nkwari akụ 1,000 dị n'ime afọ ise wee si otú a nwee ike gbanwee ma kwalite ihe karịrị ụlọ ọrụ ugbo 5,800 iji melite ọkwa ọrụ ọgbara ọhụrụ nke njem ime obodo.
Kangsen kwupụtara na n'afọ ndị na -adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ime obodo nke Beijing abawanyela. Beijing emejuputala njem nlegharị anya oge ezumike, na-elekwasị anya n'ịmepụta ụzọ karịrị ogo iri, ihe karịrị obodo nta ezumike 100 mara mma, ihe karịrị ogige ntụrụndụ ezumike 1,000, yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku ndị nnata omenala. N'oge ezumike "Draịvụ ụgbọ mmiri", Beijing nwetara ngụkọta nde ndị njem nleta 1.846 maka njem ime obodo, mmụba otu afọ na ugboro 12.9 wee gbakee na 89.3% n'otu oge ahụ na 2019; ego ha ji arụ ọrụ bụ nde yuan 251.36, mmụba kwa afọ nke ugboro 13.9, yana mmụba nke otu afọ na 14.2%.
N'ihe banyere imezi gburugburu ebe obibi n'ime ime obodo, Beijing mere mmemme "Ngosi Obodo Nari Otu Nmegharị na Otu Puku ime Obodo", nke rụchara ọrụ nrụzigharị gburugburu ebe obibi nke obodo 3254, wee nwee ọganiru dị mkpa na iwu obodo nta ndị mara mma: ọnụego mkpuchi nke ụlọ mposi na -adịghị emerụ ahụ ruru 99.34%; ọnụ ọgụgụ obodo ndị ụlọ ọrụ nsị mmiri na -ekpuchi arịala elu ruo 1,806; ngụkọta obodo ngosipụta ihe mkpofu 1,500 na obodo nta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ 1,000 ka emepụtara. Obodo 3386 na ihe dị ka nde ezinụlọ 1.3 na Beijing enwetawo kpo oku dị ọcha, nke nyerela onyinye dị mma iji merie n'ọgụ ahụ iji chebe mbara igwe na -acha anụnụ anụnụ.
Nke gara aga: Kedu otu esi ahọrọ igwe eletriki eletrik?